"Kylian Mbappe Wuu Ku Biiri Doonaa Liverpool Haddii.." Khabiirka Kubada Cagta France Julien Laurens Oo Sir Badan Kashifay | Laacib.net
“Kylian Mbappe Wuu Ku Biiri Doonaa Liverpool Haddii..” Khabiirka Kubada Cagta France Julien Laurens Oo Sir Badan Kashifay
January 26, 2020 Balaleti Comments Off on “Kylian Mbappe Wuu Ku Biiri Doonaa Liverpool Haddii..” Khabiirka Kubada Cagta France Julien Laurens Oo Sir Badan Kashifay
Waxaa isa soo taraya wararka xanta ee Kylian Mbappe la xiriirinaya kooxda Ingariiska ee Liverpool, waana sababta mar walba Twitter loogu arko hal ku dhiga #Mbappe2020.
Mbappe ayaa wareysigii ugu danbeeyay ee uu siiyay BBC Sport waxa uu si weyn ugu amaanay kooxda heysata Champions League haatana u sharaxan inay hanato horyaalka Premier League, taasoo sii hurisay wararka xanta ahaa.
Real Madrid ayaa muddo dheer lala xiriirinayay Mbappe, wuxuuna qorshahooda yahay inay u dhaqaaqaan xagaaga soo socda markaasoo xiddiga Faraniiska ay muddo yar uga harsanaaneyso qandaraaskiisa PSG.
Laakiin khabiirka kubada cagta France Julien Laurens ayaa sheegay in inkastoo uu ku riyoonayo inuu maalin uun u dheelo Real Madrid in hadana uu si degdeg ah ku aqbali doono Liverpool haddii ay soo buuxiso sharuudaha horyaala.
“Waa wax aad u sahlan” ayuu yiri khabiirka kubada cagta France Julien Laurens oo u waramayay ESPN FC.
“Haddii Liverpool ay bixin karto 300 milyan ama 350 milyan euro oo ay la socdaan lacago abaalmarin ah oo ay miiska soo saaraan, waana lacagta ay PSG duldhigtay Mbappe.
“Haddii Liverpool ay awoodi karto lacagtaas, oo ay bixin karto mushaharka uu doonayo, si degdeg ah ayuu ku aqbali lahaa dalabkaas. Waa sax Real Madrid ayaa ah riyadiisa, waana hubaal inuu maalin uun u dheeli doono Real Madrid.
“Laakiin da’diisa waa 21 jir weli waxa uu heystaa waqti uu meel kale ku aado islamarkaana uu maalin uun u dheelo Madrid.
“Xaqiiqda waxay tahay inuu sidoo kale jecel yahay inuu ka dheelo Premier League, Liverpool ayaana xiiso weyn u ah xiddigaha ugu fiican dunida waqti xaadirkaan madaama ay wacdarro dhigayaan iyo falsafada guuleysatay ee Jurgen Klopp.”